Iminxeba emikhulu nge sipgate.io > UVielhuber uDavid
Iminxeba emikhulu nge sipgate.io03
Nge sipgate.io, iSipgate yenze i-API enomdla yelifu apho uninzi lwayo lukhetha khona ngefowuni ye-Intanethi. Iakhawunti ayihlawulelwa, kwaye kukho inketho yokusetha nayiphi na inombolo yomthumeli simahla kwivenkile. Amaxwebhu avela ku-sipgate.io asenokwandiswa, kodwa ngokufunda kancinci kwi- Sipgate API esemthethweni unokukhawuleza uziqonde izinto ezinomdla.
Kule khowudi ilandelayo sisebenzisa le ndlela yokuziphatha ilandelayo: Ngeenjongo zokuvavanya, sibiza iinombolo zomnxeba ezilandelelanayo emva komnye ukudlala ifayile yeaudiyo emva koko uyixhome kwakhona.
Ulwandiso lwe- PHP XML-RPC kufuneka ifakwe. Iifowuni zenziwe ngoku -ukuze udlale ifayile yeaudiyo, singena kwi-URL ye-trigger kwi-Sipgate backend yeefowuni eziphumayo (ukuba siyazibiza) nakwiifowuni ezingenayo (ukuba kukho umntu ofowunayo kwakhona) kwaye usebenze ukulungisa ingxaki -Log:
Ngoku silungiselela ifayile yeaudiyo (ekufuneka ibe kumaxwebhu ifumaneke njengefayile ye-mono 16bit PCM WAV). Ukwenza oku, siphosa i-ffmpeg ukuguqula ifayile ye-MP3 kwifomathi oyifunayo:
Ngoku silayisha le fayile yeWAV kunye neskripthi seXML silandelayo kwi https://www.tld.com/sipgate:/
Ukuba ufuna ukwahluka kwiifayile zomsindo, kuyacetyiswa ukuba usoloko usebenzisa igama lefayile entsha (isandi-v * .wav) ngenxa yezizathu zecache.
Iifowuni ezifanayo zinokwenzeka (ngokwengxelo esemthethweni evela eSipgate kukho umda kunxibelelwano olu-5 ngaxeshanye, kodwa ndakwazi ukuseka ngaphezulu), apha kuya kufuneka ulungelelanise into kwixabiso lokulala.